Mogadishu Journal » Xanta ayaa leh: Everton ayaa 35m ku dooneysa laacibka Barcelona Coutinho
Everton ayaa ku mashquulsanayd suuqa kala iibsiga muddooyinkii ugu dambeeyay waxayna isku diyaarinaysaa inay mar kale soo baxdo.
Toffees, oo uu hogaaminayo labo jeer ku guuleystaha Champions League Carlo Ancelotti, ayaa keensaday James Rodriguez, Abdoulaye Doucoure iyo Allan xilli ciyaareedkan.
Everton ayaa wali ku jirta ugaarsiga loogu jiro kubbada cagta Yurub iyada oo 10ka xul ee ugu sareeya ay u muuqato mid la hubo laakiin hamiga milkiilaha Farhad Moshiri ayaa wali sii gubanaya.
DUGSIGA DUWAN - EVERTON SET FOR COUTINHO SPLASH
Everton ayaa qarka u saaran inay la soo wareegto weeraryahankii hore ee Liverpool Philippe Coutinho oo ay kala soo wareegeyso Barcelona heshiis 35 milyan ginni ah, sida ay qortay The Sun.
Toffees ayaa lagu soo waramayaa inay durbadiiba guryo ugaarsi ugu jiraan 28 jirkaan reer Brazil, kaasoo kula biiri lahaa wadankiisa Richarlison, Bernard iyo Allan garoonka Goodison Park.
Coutinho waligiis si rasmi ah uma uusan dagin Barcelona tan iyo markii uu ka tagay Liverpool kuna biiray Camp Nou sanadkii 2018, isagoo amaah ku qaatay Bayern Munich, halka uu dhaawacyo ku maqnaa xilli ciyaareedkan.
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay dooneyso inay iska dirto Coutinho, kaasoo qaliin jilibka ah lagu sameeyay horaantii bishaan, xitaa qiimo jaban.
- Calciomercato ayaa sheeganeysa in Inter ay diiday kooxda Manchester City oo ku aadan saxiixa Romelu Lukaku, iyagoo ku adkeysanaya inaysan diyaar u aheyn inay dhageystaan ​​dalab kasta oo ku aadan ciyaaryahanka reer Belgium.
- Aston Villa ayaa isha ku heysa xaalada Tammy Abraham ee Chelsea ka dib markii ay soo baxday in Blues ay dooneyso inay ku iibiso qiimo lagu sheegay 40 milyan ginni, sida ay qortay The Mirror.
- The Sun ayaa qortay in Brighton's Ben White uu soo jiitay xiisaha Borussia Dortmund oo ku biiraya kooxaha sida Manchester United, Paris Saint-Germain iyo Arsenal.
- Tottenham ayaa rajeyneysa inay kala hadasho tababaraha Ajax Erik ten Hag inuu qabto booskooda banaan ka dib ceyrintii Jose Mourinho, sida laga soo xigtay The Guardian.